Vola 200 sy 100 Ariary
Par: Variana be aho
Date: 18 mai 2017 - 07:56
Nanao mission tany Antalaha ny tenanay dia 1.000 Ariary ny course.
Nomeko 200 Ariary dimy ilay mpitondra dia sosotra hoe mba ataovy tokana hono @ manaraka fa tsy tia ireny izy, sady ny mpivarotra miavonavona raha vao vola toy ireny.
Da zendana ny tegna !!!
Re: Vola 200 sy 100 Ariary
Date: 18 mai 2017 - 13:07
Ka normal anie izany Bainy e,izy efa zatra mikirakira 10.000 ar sy 5.000 ar ,satria anisan'ny manankarena izy amin'ny lavanila ,fa angaha ohatranao hoe hanaovy tabia roa toko sy anana eran ny tanana .
Date: 18 mai 2017 - 13:30
Tompkolahy sy tompkovavy,
Vaoporofo izao fa mila vola 20.000 Ar isika.
Tsy misy fampandrosoana raha tsy tsy misy ny fiaraha-mientana am fampiasana vola vaventy
Par: Tany Nosy Be
Date: 19 mai 2017 - 07:32
Tany Nosy Be aho t@ 2007 dia niresaka t@ mponina tany ary nilazany fa raha misy mpangataka ka omenao 50 ariary, dia tonga dia manompa.
Mbola somary nisy valeur ihany anefa ny 50 ariary t@ izany teto Iarivo.
Date: 19 mai 2017 - 10:22
Ny mpangataka ary efa miady varotra oe ataovy 200 na ariary 100 raha tsy misy.
Date: 21 mai 2017 - 17:26
izany no manaporofo fa tsy misy vidiny sy lanjany ilay vola
rehefa matanjaka ny vola dia miteny ho azy ianao hoe : mahavita be ny 1 000 fmg
inona intsony no vitan'izany?
fitabitro fotsiny ilay mody ampiakarina tokana ny vola 100 000 fmg fa ny tena marina mihendanja ilay vola, ary manahirana anefa ny hiteny an'izay, fa mody atao hoe : mora tehirizina anaty paosy..oups
Date: 21 mai 2017 - 21:47
Fa izao kosa ary :
Raha izaho no sendra an'izany dia, raisiko ilay vola 50 averiny amiko. Dia ampiako fitenenana hoe :
""Mba ampio 50 ary ity dimampoloko ity fa izaho no tena mila 50 fa tsy ianao""
Lazaiko azy sady ampisehoko fa mitady 100ariary aho amidiko mofokely.
Date: 21 mai 2017 - 21:59
Tsy azoko ilay hoe nandeha tany NOSY BE dia niresaka tamin'ny mponina fa maninona raha tonga dia nijery mpangataka.
Mety misy mpangataka tsy dia misy saina na be ambom-po ka mandaha vola fa raha ny akamaroany aloha dia mandray izay omena fa zara aza misy manome.
Ny mahantra any NOSY BE mitovy amin'ny mahantra eto iarivo. Ny zavatra tena faritanao dia ny faritany fa tsy ny fahantrana.
Date: 22 mai 2017 - 12:55
amin'ny fiainana andavan'andro fotsiny dia hita mazava tsara fa mihen-danja ny vola.
Tsy mila ianarana any ampianarana ny mamantatra an'izay, fa hiainana toy ny mihinan-kanina isan'andro mandrapahafaty
fa ny manampahaizana dia raha olomarina sy mazava saina dia mitady lalana hampiakatra ny lanjany. Izay no mila fianarana.
Fa ny eto amintsika moa efa principe mazava tsara nanomboka tamin'ny fanjanahan-tany ilay tsindrio ho lavo fa tsy (fa lavo) . Ka izay mahitahita zavatra maizina ihany no be vola, dia ilay antsointsika hoe : mibizina.
Date: 24 juin 2017 - 11:09
Ary mety atao bizna vaovao ihany ny managona ny vola vy reny a. Avy eo atakalo any @ banky de mety ho lasa volabe. Izaho tany ambilobe nividy zavatra teo an-tsena dia tokony hisy fameriny 50 ar de saika hodian'lay mpivarotra fanina. Nandrasako teo nitady madinika tany fa nahita ihany ny farany. Hay tsy miasa intsony any amin-drizalà reny vola vy reny. Mbola manankery ireny hoà fa akako polisy enao raha tsy manome. Nimonomonona sy niteny ratsy teo lery fa tsy noraharahiko. Tokony ampianarina tsara ny olona fa vola daholo na ireny 1fr ireny aza. Raha 1 gony @ reny ange ka efa mahazo phone haut de gamme e.
Date: 29 juin 2017 - 10:32